Iindaba -Icharm eNtsha yokuThengisa okuKrelekrele eTshayina, i-Hwatime Medical kwi-51 Dusseldorf Medical Exhibition eJamani
Umtsalane omtsha woThengiso lobuGcisa baseTshayina, oNyango lwaseHwatime kwiMiboniso yama-51 yaseDusseldorf eJamani
Umboniso wama-51 waseJamani iDusseldorf uMboniso wezixhobo zeZonyango zamanye amazwe
I-MEDICA 2019 enkulu ivulwe kwiDusseldorf iNgqungquthela yaMazwe ngaMazwe kunye neZiko leMiboniso, eJamani ngo-Novemba 18, ixesha lendawo. Indawo yomboniso yafikelela kwizikwere ezingama-283,800. Kwaye iinkampani ezingaphezu kwama-5 000 zamazwe aphesheya ezivela phantse kumazwe ali-130 nakwimimandla ethathe inxaxheba kulo mboniso.
I-MEDICA ngowona msitho mkhulu wecandelo lezonyango. Ngaphezulu kweminyaka engama-40 isekwe ngokuqinileyo kwikhalenda nganye yengcali. Zininzi izizathu zokuba kutheni iMEDICA yahluke kangaka. Okokuqala, umsitho ngowona mboniso mkhulu wezorhwebo kwezonyango kwihlabathi.
Ngapha koko, unyaka nonyaka, abantu abakhokelayo kwicandelo lezeshishini, elezophando, kunye nezopolitiko bayasithanda esi siganeko sikumgangatho ophezulu ngobukho babo - ngokwendalo ecaleni kwamashumi amawaka eengcali zikazwelonke nezamazwe aphesheya kunye nabenzi bezigqibo kwicandelo.
Njengomboniso wezonyango ongu-1 emhlabeni, ubukho beMEDICA bukhulu kakhulu kunentengiso. Ikhokelela kwicala lophuhliso lwamashishini ezonyango, kwaye ikwayindibaniselwano efanelekileyo yonyango kunye netekhnoloji yale mihla.
Umboniso womthengisi wetekhnoloji yezonyango UQINISEKILE kunye neMEDICA badlala indima yokuhlangana kunye. Le miboniso mibini ngokulandelelana ibonelela ngokuhamba kwamandla kumashishini abo, ngelixa kwangaxeshanye kukhuthaza ukukhula kwetekhnoloji yezonyango.
U-Hwatime Medical uthathe inxaxheba kumnyhadala we-COMPAMED eDusseldorf, eJamani ngo-Novemba 18 ukuya ku-21, 2019 enoluhlu olupheleleyo lweemveliso zokubeka iliso kunye ne-PSA ye-molecular sieve oxygen system, kwaye waphumelela ngokupheleleyo.
Kumboniso weentsuku ezi-4, hayi abasasazi nabathengi baseHwatime Medical kuphela kunye nabathengi abatyelele umnquba, kodwa kunye nenani elikhulu leYurophu entsha, uMzantsi Melika, abathengi baseAfrika abavela kumazwe ahlukeneyo nakwimimandla kwihlabathi liphela batyelele umnquba kwaye bathetha-thethana ngemicimbi yentsebenziswano nganye emva kwenye.
I-Hwatime Medical itsale inani elikhulu labathengi abanokubakho kwaye inyusa ukwandiswa kweemarike zase China kwezonyango ukufikelela kwinqanaba elitsha.
Ixesha Post: Nov-22-2019